Ahimad Taqii - Wikipedia
(Redirected from Hundee)
Ahimad Taqii (1942? - ) qabsaawaa miseensa Waraana Bilisummaa Oromoo warra jalqabaa keessa tokko. Ahimad Taqii waraana Xirroorratti wareegame.
Ahimad Taqii abbaasaa Muhaammad Rashaad fi harmeesaa Maariyaam Ahimadirraa naannoo bara 1942 dhalate. Ahimad kan dhalate Oromiyaa Bahaa, Aanaa Habroo ganda Balballeettii jedhamtu keessatti. Ahimad maqaa warri baasaniif yoo ta'u aqaan qabsoosaa Hundee ture. 
Ahimad-Taqii yeroo umuriinsaa digdama ta'u obboleessasaa Muttaaqii fi boodarraa ammoo obboleessa kan biraa Israafiil wajjin magaalaa Galamsootti galanii daldala eegalan. Jeneraal Taaddasaa Birruu sochii Waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti godheen wayita magaalaa Galamsootti hidhame, Ahimad-Taqii isaan wajjin wal bare. Akkuma garaa wal baraniin, rakkoo ummata Oromoo fi mirga dhala namummaa dhabuu ummata Oromoo kaasanii yaada wal-jijjiiruf carraa argate.
Ahmad Taqii ummata naannoo Galamsoo jiran miidhaa sirni nafxanyaa ummata Oromoorraan ga'aa jiru hirree tokkoon ofirraa ittisuu akka danda'an gorse. Mirga nafxanyootan irraa fudhatame qabsaa'anii deebifachuu akka qaban onnachiisan. Ummata dadammaqsuu fi onnachiisuun booda, namoota filataman meesha waraanaa hidhachiisuf qophii xumuran. Boodarra, Elemoo Qilxuu qabsaawota fudhatee gara Gaara Gubbaa Qorichaa deeme. Ahimad Taqiinillee bakka Buubbee jedhamtu kan Galamsoorraa 33km argamtutti qabsaawotatti dabalame.
↑ 1.0 1.1 1.2 Muhaammad Sayid, Seenaa fi Qabsoo Oromootaa, maxxansaaa 3ffaa, 2015
Retrieved from "https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Ahimad_Taqii&oldid=29046"
This page was last edited on 28 Adooleessa 2016, at 13:11.